Madaarka Caalamiga ah ee Malta wuxuu u Furayaa Dhamaan Duullimaadyada Diyaaradaha 15-ka Luulyo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Madaarka Caalamiga ah ee Malta wuxuu u Furayaa Dhamaan Duullimaadyada Diyaaradaha 15-ka Luulyo
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabhada Malta • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Valletta Habeenkii © Vievmalmal.com - Madaarka Caalamiga ah ee Malta Oo Dib Loo Furo
Wasaaradda Dalxiiska iyo Difaaca Macaamiisha Malta iyo Maamulka Dalxiiska Malta (MTA) waxay soo dhoweynayaan dhawaaqii shalay ka soo yeeray ra’iisul wasaare Robert Abela ee ahaa in lix waddan oo dheeri ah lagu daray liiska meelaha la tagayo marka garoonka caalamiga ah ee Malta si rasmi ah loo furo 1da Luulyo, iyo in xayiraadaha saaran dhamaan duulimaadyada kale la qaadi doono 15-ka July.
Meelaha lagu daray liiska meelaha la furayo 1-da Luulyo waa Talyaaniga (marka laga reebo Emilia Romagna, Lombardy, iyo Piemonte), Faransiiska (marka laga reebo Ile de France), Spain (marka laga reebo Madrid, Catalonia, Castilla -La Mancha, Castile, iyo Leon), Poland (marka laga reebo Madaarka Katowice), Griiga iyo Kroatia. Liiska asalka ah ee wadamada dib loogu furi doono safarka waxaa kamid ahaa Jarmalka, Austria, Sicily, Cyprus, Switzerland, Sardegna, Iceland, Slovakia, Norway, Denmark, Hungary, Finland, Ireland, Lithuania, Latvia, Estonia, Luxembourg, iyo Czech Republic. Meelo kale oo badan oo la aadayo ayaa lagu dhawaaqi doonaa waqtigeeda, marka la helo oggolaansho ka timaadda maamulka caafimaadka. Israel oo lagu soo daray liiska asalka ah ayaa laga saaray. Liiska meelaha la tagayo si joogto ah ayaa loola socon doonaa waana la eegi doonaa haddii loo baahdo waana laga heli karaa https://www.visitmalta.com/en/covid-19
Wasiirka Dalxiiska iyo Ilaalinta Macaamiisha Julia Farrugia Portelli ayaa sheegtay in furitaanka Madaarka Caalamiga ah ee Malta ay sii wadi doonto dalxiiskeena iyo dhaqaalaheena. Waxay intaas ku dartay in shaqadii la qabtay usbuucyadii iyo bilihii la soo dhaafay ay Malta ku sifeysay mid ka mid ah meelaha ugu amaanka wanaagsan. Wasaaradda iyo Hay'adda Dalxiiska ee Malta waxay diiradda saari doonaan suuq-geynta iyo dhiirrigelinno kala duwan oo lagu soo jiito dalxiisayaasha ayuu ku soo gabagabeeyay Wasiirka.
Dr. Gavin Gulia, Guddoomiyaha Hay'adda Dalxiiska Malta, ayaa sheegay in lixdaas meelood ee dheeriga ah ee furmaya laga bilaabo 1da Luulyo, inta hartayna la helayo bartamaha bisha soo socota, waaxda socdaalka iyo soo dhoweynta waxay bilaabi karaan inay si dhakhso leh uga soo kabtaan dhulka lumay. . MTA waxay sameyn doontaa wax walba oo awoodeeda ah si ay u taageerto daneeyayaasha maxalliga ah dadaalkooda si ay dib ugu soo ceshadaan heerarka soo-galootiga soo galaya ee caadada u ahaa ka hor dhibaatada adduunka.
Ku dhawaaqida shaley ayaa timid kadib warbixintii usbuucii la soo dhaafey ee komishanka yurub taas oo wadamada yurub ku dhiiri galiyeen in laga qaado xayiraadaha safarka ee ururka dhexdiisa waxayna soo jeediyeen in si tartiib tartiib ah looga qaado xayiraada safarka dibada laga bilaabo 1da Luulyo. xayiraadaha safarkooda.
Raiisel wasaaraha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in la qaadayo xaalada degdega ah ee caafimaadka bulshada ee lagu dhawaaqay sababo la xiriira Cudurka faafa ee COVID-19. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan ogeysiisyada sharci ee haray ee la xiriira xayiraadaha COVID-19 dib loola noqon doono, oo ay ku jiraan mamnuucida isu imaatinnada dad ka badan 75 qof. Kala fogeynta bulshada, nadaafadda, iyo isticmaalka maaskaro wajiga halka lagama maarmaanka ah ayaa weli lagu talinayaa.
Malta Sunny iyo Ammaan, Buug yar oo dijitaal ah oo ay soo saartay Wasaaradda Dalxiiska & Difaaca Macaamiisha ayaa laga heli karaa internetka.
Jasiiradaha qoraxda ee Malta, oo ku yaal bartamaha Badda Dhexe, waxay hoy u yihiin uruurinta ugu caansan ee hidaha la dhisay, oo ay ku jiraan cufnaanta ugu sareysa ee UNESCO Goobaha Dhaxalka Adduunka ee waddan kasta oo dowlad ah meel kasta. Valletta oo ay dhistay dadka sharafta leh ee loo yaqaan 'Knights of St. John' waa mid ka mid ah indhaha UNESCO iyo Caasimadda Dhaqanka Yurub ee 2018. Aabbaha Malta ee dhagaxu wuxuu u dhexeeyaa qaab dhismeedka ugu da'da weyn adduunka ee bilaashka ah, illaa mid ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska ee aadka looga cabsado. nidaamyada difaaca, oo ay ku jiraan iskudhaf hodanka ah ee dhismaha, diinta iyo qaabdhismeedka milatari ee xilliyadii hore, xilliyadii dhexe iyo xilliyadii hore ee casriga. Cimilo aad u sarreysa oo qorax leh, xeebo soo jiidasho leh, nolol maalmeed horumar leh, iyo 7,000 sano oo taariikh xiiso leh, waxaa jira heshiis weyn oo la arko oo la sameeyo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee Malta, booqo www.visitmalta.com
Warar dheeraad ah ayaa ka taagan Malta.